युद्ध साहित्यलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्ने छु
ब्रिटिस लाहुरेबाट सेवानिवृत्त म्याग्दीका दुत पुन (चिम्खोले काइँला) प्रतिभावान् स्रष्टा हुन् । बेलायतको निजामति सेवामा कार्यरत पुनले फुर्सदको समय साहित्य, संगीत, पत्रकारिता र समाजसेवामा खर्चिरहेका छन् । खाली समयलाई सदुपयोग गरेरै पनि उनले एक दशकको अवधिमा आधा दर्जनभन्दा बढी विभिन्न विधाका कृतिहरु पस्किसके । देश र समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्दै विकृति र विसंगतिलाई आफ्नो सिर्जनामा तिखो व्यंग्य गर्न माहिर पुनले पछिल्लो समय वास्तविकतामा आधारित कथासंग्रह ’अर्ली भाइ’ बजारमा ल्याएका छन् । कथाकार, गीतकार, साहित्यकार तथा समाजसेवीको रुपमा चिनिएका दुत पुन (चिम्खोले काइँला)सँग जानु काम्बाङ लिङ्गदेनले गरेको साहित्यिक कुरोकानी :
बेलायतमा बाँच्नको लागि एउटा न एउटा पेसा गर्नु नै प¥यो । पेसागत हिसाबमा भन्ने हो भने संयुक्त अधिराज्य बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको निजामती कर्मचारी सेवामा कार्यरत छु । सामाजिक सेवाको कुरो गर्ने हो भने नेपाल तथा युकेमा आबद्ध थुप्रै सामाजिक संघसंस्थाहरुमा आबद्ध छु । पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि बेलायतबाट प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका एभरेष्ट टाइम्समा सहसम्पादक तथा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत छु भने फुर्सदको समयमा नेपाली साहित्यमा पनि कलम तिखार्ने प्रयास गर्छु ।
केही महिनाअघि बजारमा आएको कथासंग्रह ’अर्ली भाइ’मा कतिवटा कथा समेट्नु भएको छ र कस्ता खालका विषयवस्तुको कथा छन् ?
कथासंग्रह अर्ली भाइमा जम्मा दसवटा कथाहरु समावेश छन्, जसमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको तथा उनका परिवारहरुको जीवनीमा आधारित युद्धका कथाहरु समावेश गर्ने प्रयास गरेको छु । र, यो कथासंग्रहलाई युद्ध साहित्य भन्न रुचाउँछु ।
तपाईको साहित्यिक यात्रा कहिलेबाट सुरु भयो ?
मेरो साहित्य यात्रा स्कुले जीवनदेखि नै सुरु भएको हो । तर, औपचारिक रुपमा बीएफबीएस हङकङ र प्रबते मासिक पत्रिकाबाट १९८० को दशकतिरबाट सुरु भएको हो भन्न रुचाउँछु ।
’’मेजर मेन्सन खाउली’’ शीर्षकमा कथा पनि गीत पनि राख्नुभएको रहेछ, गीत र कथा दुवै एकै हुन् कि फरक ?
हो, मेजर पेन्सन खाउली भन्ने शीर्षकको गीत चलचित्र मेजर पेन्सन खाउलीमा राखेको छु । वास्तवमा सोही गीतले नै चलचित्र जन्माएको हो । कथासंग्रह अर्ली भाइमा मेजर भनेर कमिसन मेजरको कथा लेखिएको छ भने चलचित्रमा वारनट अफिसर तथा सार्जन्ट मेजरले नायकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
तपाईको कथासंग्रहले समाजमा कस्तो खालको सन्देश जान्छ भन्ने विश्वास लिनुभएछ ? र, प्रतिक्रिया कस्तो पाइरहनु भएको छ ?
कथासंग्रह अर्ली भाइले गोर्खा सैनिक तथा उनका परिवारको एकादेशको तथा एउटा कालखण्डको दस्तावेज हो र यो कथासंग्रहमा एउटा जिउँदो इतिहासको निर्माण भएको सन्देश गएको छ र जाने छ भन्ने विश्वास गरेको छु । कथाहरु धेरैले लेख्न सक्छन् तर हाम्रो नेपाली समाजभित्रको लुकेको गोर्खालीको युद्धकथा तथा वास्तविक कथाहरु प्रकाशित गर्न धेरै गाह्रो छ । त्यसैले यो कथा प्रकाशित गर्नमा धेरै जोखिम मोलेको छु र वास्तविक कथा भएको हुँदा प्रतिक्रिया पनि वास्तविक नै पाएको छु ।
तपाईंको कृतिहरु के के छन् ?
पहिलो कृति : सुनदन्ते कवितासंग्रह, सन् २००७
दोस्रो कृति : आधुनिक गीति एल्बम लन्डनको कोसेली, सन् २००९
तेस्रो कृति : युकेको जिन्दकी कवितासंग्रह, सन् २०११
चौथो कृति : दोहोरी गीति एल्बम यूकेतिर जाउली, सन् २०१३
पाँचौ कृति : फिल्म निर्माण “मेजर पेन्सन खाउली“, २०१६ (निर्माता, पटकथा लेखन र गीतहरुको शब्द रचना आफैं)
छैटौं कृति : वेस्ट अफ चिम्खोले काइँला २०१७
पछिल्लो कृति : कथासंग्रह अर्ली भाइ २०१७
अहिलेको यो बदलिँदो राजनीति र पद लुछाचुँडीका कारण देश र जनता दिक्क भएको बेला, कस्ता खालका साहित्य लेखिनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने पछिल्लो अवस्थामा परिपक्क राजनीतिको नजिक नजिक आएको जस्तो भान भएको छ । तर, पनि हेर्न अझै बाँकी छ जस्तो लाग्छ र यस्तो अवस्थामा हामीले साहित्यबाट खबरदारी चाहिँ गर्नै पर्छ । यसभन्दा पहिलाको कवितासंग्रह युकेको जिन्दगीमा मैले कवितामार्फत धेरै खबरदारी गरेको छु र भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचारको विरोधमा हामीले साहित्य सिर्जना गर्नुपर्छ तथा खबरदारी गर्नुपर्छ ।
साहित्य सँधै भोगिरहने परिवेश वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ कि लेखक आफै त्यो परिवेशमा घुमिरहन्छन् ? गोर्खा सैनिकमा आबद्ध दाजुभाइहरुका सिर्जना गोली, बारुद, बन्दुकलाई बिम्ब बनाएर लेखिएको पाइन्छ नि ?
गोर्खा सैनिकमा आबद्ध दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले गोर्खा सैनिकहरुकै जीवनलाई आधार बनाएर तथा बिम्ब बनाएर सिर्जना गर्ने गरेका छन् । हामी गोर्खा सैनिकमा कार्यरत हुँदा धेरै पक्षहरु राम्रा हुँदाहुँदै पनि एक, दुइ पक्ष नराम्रा थिए । सोही राम्रा पक्ष तथा नराम्रा पक्षहरु मेरा लागि सिर्जनाको बिम्बहरु बनेका छन् र म आफैं पनि गोर्खा सैनिकको नाताले गर्दा साहित्य सँगसँगै यो परिवेशमा बिम्ब बनेर तथा साहित्यकार बनेर अगाडि बढिरहेको छु जस्तो भान भएको छ ।
बेलायतजस्तो अति व्यस्त ठाउँमा बसेर सिर्जना गर्न कत्तिको सजिलो छ ?
नेपालीमा उखान छ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ खासै असजिलो त भएको छैन तर पनि कहिलेकाहीं जब भावना उर्लेर आउँछ त्यतिबेला समय तथा परिस्थिति अनुकूल नभएर पक्रन सकिन्न । समय र परिस्थिति मिलाएर सोही भावनालाई सम्झेर लेख्न खोज्दा अपुरो भएको धेरै पटक महसुस गरेको छु ।
तपाई अरुको पुस्तक या सिर्जनाहरु कतिको पढ्नु हुन्छ ? र तपाईंलाई मनपर्ने एकमात्र लेखकको नाम लिन परे कसको लिनुहुन्छ ?
पुस्तक तथा सिर्जनाहरु सकेसम्म पढ्ने गर्छु र आजभोलि पढ्नभन्दा सुन्न रुचाउँछु । मैले धेरै सर्जक तथा लेखकहरुको पुस्तक तथा सिर्जनाहरु पढेको छु । नाम लिँदा सबैको लिन प¥यो । एकजनाको मात्र नाम लिँदा अन्य सर्जक तथा लेखकलाई गलाबष्च हुन्छ कि ?
तपाई त पत्रकारितामा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ, पत्रकारिताले साहित्य लेखनमा कतिको सघाउ पुर्‍याउँछ या बाधा गर्छ ?
मेरो बुझाइमा पत्रकारिता र साहित्य एक रथका दुइ पाङ्ग्रा हुन् जस्तो लाग्छ र जसले एक अर्कालाई मद्दत पु¥याइराखेको हुन्छ । दुबैलाई समाएर अगाडि बढेमा सफलता नै सफलता छ जस्तो लाग्छ, बाधा छैन ।
समाज परिवर्तनको लागि आउँदा दिनहरुमा कस्ता खाले गीत, कथा र कविता लेखिनु पर्छ ?
मेरो साहित्य र सिर्जना दुवै यथार्थको धरातलमा उभिएर विकृति र विसंगतिलाई ब्यंग्य गर्नु नै मेरो सुन्दर पक्ष हो जस्तो लाग्छ । जसले गर्दा ताली तथा गाली दुवै मिलेको छ । त्यसैले यही धारलाई पक्रेर तथा युद्धसाहित्यलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्ने छु ।
अब अर्को सिर्जना के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ?
निकट भविष्यमा सायद मेरो आत्माकथा, नियात्रा र निबन्ध ल्याउने जमर्को गर्दैछु । हेरौं, सुरुआत चाहिँ गरेको छैन ।
साहित्य क्षेत्रमा दुत पुन (चिम्खोले काइँला) एक स्थापित नाम मानिन्छ, यसैको नाताले लेख्न रहर गरिरहनु हुने पछिल्लो पुस्तालाई कस्तो सल्लाह र सुझाव दिनु चाहनुहुन्छ ?
हजुरले भनेको जस्तो स्थापित साहित्यकार त होइन तर आफ्नो मनको भावनाहरु चाहिँ पोखिरहन मन लाग्छ अनि पोखाउने जमर्को गरेको छु । नयाँ पुस्ताका साहित्यकारहरुलाई यो सल्लाह तथा सुझाव दिन चाहन्छु कि कृतिहरु जुनै विधामा तथा जस्तो भए पनि प्रकाशित गर्ने जमर्को गर्नु होला नकि कोटको खल्तीमा, ज्याकेटको खल्तीमा तथा टेबल र दराजतिर थन्काएर नराख्नु होला । सकेसम्म पुस्तक नै प्रकाशित गर्नु होला नसके पनि पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित गर्ने जमर्को गर्नु होला । साहित्य नै भावना हो र तपाईको भावना तपाईसँग सीमित राखेर हुँदैन जति बाँड्न सक्यो त्यति राम्रो जस्तो लाग्छ ।
मैले सोध्न छुट्याएको कुनै कुरो भए मन खोलेर राख्न सक्नुहुन्छ ?
धन्यवाद समय र मौका दिनु भएकोमा । नेपाली साहित्य, गीत, संगीत, चलचित्र तथा पत्रकारितालाई माया गर्नु हुने संसारभरि छरिएर बस्नु भएका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई साहित्यिक अभिवादन ।